एक म्यासेजको भरमा जागिर चट ! – MySansar
एक म्यासेजको भरमा जागिर चट !
Posted on July 18, 2020 July 18, 2020 by mysansar
– प्रमोद न्यौपाने (@Prmdneupane) –
‘ ……(फलानो नाम) ’, व्यवस्थापनको निर्णयअनुसार तपाईँको रोजगारी सम्झौता नवीकरण नहुने जानकारी गराइन्छ। यो सूचना दिनुपर्दा दुःखी छौं।
न्यु ज २ ४ टेलिभिजनमा जेठ नलाग्दै यस्तै म्यासेजको भरमा पूर्व प्रतिवद्धता विपरित धमाधम कर्मचारी निकाल्न थालिएको थियो, सम्झौता सकिएको भन्दै।
त्यसो त लकडाउन सुरु भएको तेस्रो दिन (चैत १४ गते) टेलिभिजनका विभिन्न विभाग, शाखा प्रमुखहरुलाई बोलाएर जिएमले व्यवस्थापनको प्रस्ताव भन्दै एउटा कागजमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेका थिए।
लकडाउन भर्खरै सुरु भएको थियो। तर अचम्म, दुई महिना अगाडि (माघ) कै तलब दिन पनि लकडाउनलाई पो बहाना बनाउन थालियो। नियतै खराब !
एकातिर आफैलाई अप्ठ्यारो, अर्कोतिर सम्झौता सकिएको बहानामा पत्रकार/कर्मचारी धमाधम निकाल्ने क्रमको प्रतिवाद गर्दा थप तारो बनेको परिस्थिति! यसरी निल्नु न ओकल्नुको जबर्जस्त अवस्थामा पुर्‍याएपछि मैले जागिर छोड्ने निर्णय गरेँ। साँचो भन्नुपर्दा ‘कुचोले बढार्नुपर्ने कसिंगर हावाले उडाउने’ परिस्थिति सिर्जना गरिएपछि म अपमानबोध सहित अलग भएँ।
नियतबस् जे–जस्तो परिस्थिति बनाइएको थियो, त्यो मेरैविरुद्ध हो भन्नेमा मलाई शंका थिएन ।
असार ७ गते चौतारा पुगेर सम्मान ग्रहण गरेँ। पत्रकारितामा उल्लेख्य केही गर्न सकेको छैन। तर पनि बेला–बेलामा मित्रहरुले ‘खास्टो’ नै ओढाएर जिम्मेवारीबोध गराउँछन्, सत्कर्मका लागि प्रोत्साहित गर्छन्। सम्मान ग्रहण गरिरहँदा उद्घोषकले गरेको बखान र सम्मान–पत्रमा कोरिएका भारी शब्दहारले दिएको खुसी धेरै टिकेन। किनकि भोलिपल्टै बेरोजगार हुनु थियो।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुसार त स्थायी हुनुपर्ने थियो। तर हामीलाई करारमै राखिएको थियो। पुस मसान्तसम्म करारकै सम्झौता थियो। माघ १ देखि हुनुपर्ने नवीकरण पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि भएन। ‘हुन्छ–हुन्छ’ भन्दै टारियो। कोरोनाको महामारी सुरु भएपछि झनै प्राथमिकतामा परेन। माघ यता कानूनतः संस्थामा आवद्ध नरहेका कारण राजीनामा नभनी सेवामा नरहेको जानकारी गराए। चैत मसान्तमा त अधिकांश पत्रकार/कर्मचारीको करारको म्याद सकियो ।
‘कुनै एक व्यक्तिलाई कोरोना देखियो भने अफिस नै सिल हुन्छ। त्यो भनेको केही दिन वा हप्ता टिभी बन्द हुनु हो। त्यो ‘रिस्क’ लिन सकिँदैन। त्यसैले एक महिनाका लागि सीमित कर्मचारीले अफिसमै बसेर काम गर्नुपर्‍यो’, माथिको हवाला दिँदै जिएम सापको निर्देशन आयो। कर्मचारीको स्वास्थ्य र सुरक्षाभन्दा सिल भएर टीभीको प्रसारण नै रोकिएला भन्नेमा व्यवस्थापन बढी चिन्तित देखियो। कर्मचारीलाई संक्रमण होला कि भन्ने चिन्ता हो कि ‘धन्दा’ तलमाथि हुन्छ कि भन्ने चिन्ता !
‘जतिसुकै कठिन अवस्था आए पनि, लकडाउन जति नै लम्बिए पनि कसैलाई ननिकाल्ने, लकडाउनभर कार्यालयमै बसेर काम गर्नेलाई अतिरिक्त सुविधा, काममा नआउने (घरमै बस्ने)लाई पनि पन्ध्र दिनको तलब’, छलफलमा व्यवस्थापनले आश्वासन बाँड्यो। लकडाउन सुरु हुन्छ भन्ने हल्ला चल्ने बित्तिकै व्यवस्थापनले आलोपालो गरी १५ दिन काम लगाएर सोही अनुसार पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव ल्याइसकेको थियो। दसौं वर्ष कमाएको संस्थाले लकडाउन सुरु नभई, संभावित आर्थिक असरको लेखाजोखा नै नगरी र कर्मचारीको कुरै नसुनी ‘खाए खा, नखाए घिच’को नीति लियो।
सम्पादकीय नेतृत्वलाई तनाव दिन थालियो। उपल्ला अधिकारीबाट ‘बेतुक’का निर्देशन आउन थाले। झर्कोफर्को बढ्यो। सम्पादकीय स्वतन्त्रता विपरित खटन–पटन गराउन थालियो। हुँदा–हुँदा सम्पादकीय नेतृत्वलाई नै थाहै नदिई कार्यक्रम प्रसारण र पुनः प्रसारणको प्रबन्धसमेत गरियो। केही हुँदा ‘फलानो जिम्मेवार होइन के हेरेर बस्यो ?’ भनेर प्रश्न गर्ने तर व्यवहारमा उसैलाई सकेसम्म पन्छाउने प्रयास भयो। अमूक बहानामा अनावश्यक प्रचारबाजी गर्ने/गराउने, व्यक्तिगत स्वभावलाई कमजोरी ठान्ने र अन्तिममा स्वाभिमानमै नियोजित प्रहारको प्रयास भयो। सहकर्मी पनि भन्न थालेका थिए– ‘नियतै खराब भयो, अब सकिँदैन।’
कम खर्च बढी उत्पादनका कारण व्यवस्थापनलाई कर्मचारीलाई कार्यालयमै राख्ने ‘रहर’ पुगेको थिएन । व्यवस्थापनका अधिकारी हाक्काहाक्की भन्थे– ‘सबैलाई पैसा दिनु नपर्ने, खान–बस्न दिएपछि थोरैले काम चल्ने, अफिस लकडाउन गर्नैपर्छ ।’
त्यसबीचमा व्यवस्थापकीय अधिकारीले घिनौना हर्कत सुरु गरे ।
मेरो वाक्य पनि पूर्ण नहुँदै जिएमसापले ‘हुन्छ’ भने। सातामा मैले तीन दिन सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ‘द डिबेट’ के गर्ने भन्ने छलफलसमेत नगरी ‘कुचोले बढार्नुपर्ने कसिंगर हावाले उडायो’ भने जसरी प्रस्तुत भए उनी।
बरु, सहकर्मीले घरमा मिलाएर बस्दिएको भए हुन्थ्यो भने।
संभव भएसम्म घरबाटै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने योजना थियो, प्राविधिक कारणले संभव भएन। एउटा श्रृंखला अतिथिकै घरमा पुगेर सञ्चालन गरेँ।
सायद त्यही परिस्थितिमा थप च्याप्नुपर्छ भन्ने ठम्याएर होला विदा बस्छु भन्दा कार्यक्रमबारे चासो नै नदेखाएका तिनै जिएमले ‘खै कार्यक्रम, खै कार्यक्रम’ भनेर तनाव दिन सुरु गरे। नियतवश दिएको तनाव हो भनेर धेरै वास्ता गरिनँ।
४/५ दिनको बीचमा ‘कार्यक्रम गर्नुपर्‍यो कार्यक्रम’ भन्दै फोन गर्थे उनी। म पुरानै बाध्यता दोहोर्‍याउँथेँ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले कोरोनालाई बहाना बनाएर केहीको प्रकाशन स्थगित गरेर धेरै पत्रकार/कर्मचारीलाई बेरोजगार बनाइदियो। पत्रकार निकाल्ने नियतले अन्नपूर्ण पोस्टले विशेष पद सिर्जना गरेर दुर्गम जिल्लामा सरुवा आतंकले बजार पिटेकै छ। नयाँ पत्रिकाले धेरैलाई ‘फोर्स लिभ’ दियो। नागरिक, राजधानीमा ल्याङल्याङ नै छ। टेलिभिजनहरुले त झन कर्मचारीको चरम श्रम शोषण गरिरहेका छन्। जागिर छोडेको वर्षौसम्म तलब नपाएपछि एउटा टेलिभिजनका पूर्व कर्मचारीले पत्रकार महासंघ गुहारेको भर्खरै हो।
म पछिल्लो पटक आवद्ध रहेको टेलिभिजन एक दशकदेखि सञ्चालनमा छ। सुरुका एक/दुई वर्ष घाटा पनि भयो होला। सञ्चालकले ऋण–धन पनि गरे होला। तर, १० वर्षदेखि अविछिन्न चलिरहनुले स्पष्ट हुन्छ, एकाध वर्षपछि टेलिभिजन नाफामै छ। निरन्तर घाटामा हुन्थ्यो भने सञ्चालकलाई किन टेलिभिजनको रस बसिरहन्थ्यो? जनताको सूचनाको हक धरापमा पर्छ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ भनेर त कसैले सञ्चारमाध्यममा लगानी गरेको होइन, नाफाकै लागि हो। निरन्तर नाफा हुँदैनथ्यो भने उहिल्यै बन्द गरेर कुलेलम ठोकिसकेका हुन्थे सञ्चालक।
सञ्चारमाध्यम नै चलाउन थालेपछि सञ्चालकहरुको रवाफ बढ्न थाल्यो। रवाफ बिचौलिया प्रवृत्तिमा परिणत भयो। जसले लाज पचाउँदै लग्यो। ‘बार्गेनिङ’ गर्ने लत बसायो। तिनले सञ्चारमाध्यम धम्क्याएर असुली धन्दा चलाउने अखडा बनाए। सञ्चारमाध्यमको नाफा अन्त लगेर व्यवसाय विस्तार गरे। ‘पख्लास्’ भनेर धम्क्याएकै भरमा लगानी नै नगरी दर्जनौं कम्पनीका सञ्चालक भए। हजारौं कित्ता सेयर कुम्लयाए। कयौं रोपनी जग्गा हत्याए। केही वर्षकै बीचमा सञ्चार संस्थाकै बलमा सञ्चालक नवधनाढ्य भए।
पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिमै रहेका र दलगत भ्रातृ संगठनकै नेतृत्व गरिरहेका पनि अन्यायमा परेका छन्। तर, लाजगाजका कारण तिनले ‘मलाई गलहत्याइयो’ भन्न सकेका छैनन्। सञ्चार प्रतिष्ठानमा सम्पादकीय नेतृत्व गरिरहेका मेरा केही मित्र ‘अहिले बिदामा छु’ भनेर इज्जत जोगाउने प्रयासमा छन्, जबकि तिनलाई कार्यालयले विदा गरिसक्यो। अरुको अन्याय उजागर गर्ने पत्रकार आफूमाथि भएको अन्याय लुकाउन अभिशप्त छ। किन ?
यसबीचमा केही साना–ठूला सम्पादकले कार्यरत संस्था छोडे। प्रचार चाहीँ ‘व्यवस्थापन श्रमजीवीको पक्षमा नरहेकाले तिनलाई अन्याय हुँदा टुलुटुलु हेर्न सकिएन’ भनेर गरियो। तर, तिनले कारण व्यक्तिगत हो वा प्रचारमा आए झैं श्रमजीवीको मुद्दा भन्नेबारे मुख खोलेका छैनन्। हुन त यो उनीहरुको व्यक्तिगत विषय होला। तर, श्रमजीवीकै पक्ष लिएकाले राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् भने ती खुलेर आउन सक्नुपर्छ। शक्तिशाली सम्पादक त जागिर हापेर आफ्नै सहकर्मीको मुद्दामा मौन बस्छन् भने तल्ला तहका पत्रकार कसरी खुलेर आउन सक्छन्? यो आफूमाथि भएको अन्याय लाजगाजका कारण लुकाउने होइन, खुलेर बताएर कथित सञ्चार उद्यमीको नियत प्रष्ट्याउने बेला हो।
सम्पादक भन्नेले आफैसहित सहकर्मीमाथि भइरहेको अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउने हिम्मत गरे भने यो लडाईँ श्रमजीवीको पक्षमा आउने छ। तर, अधिकांश सम्पादक श्रमजीवीको पक्षमा देखिएनन्। सम्पादकको ‘साहु रिझाउने, जागिर जोगाउने’ प्रवृत्तिका कारण धेरै पत्रकार गलहत्याइएका छन्। तिनले थोरै मात्रै अडान लिन्थे भने पनि साहुजीका लागि कोरानोको बहानाबाजी
यति फलदायी हुने थिएन। ताइँनतुइँका विषयमा वक्तव्यबाजी गर्ने सम्पादकलाई सहकर्मीको चरम पीडादायी अवस्थाले पोलेको छैन जब पोल्छ, तब तिनीहरु नै गलहत्याइन्छन्।
लकडाउनका बेला साना उद्यमीले पनि आफ्ना कर्मचारीलाई नियमित सेवा–सुविधा दिए । मेरो घर नजिकैको ग्रील कारखानाका एक साहुजीको चार महिनासम्म पुरानै सेवा–सुविधा दिएर कर्मचारी पालेछन् । आपत–विपतमा थप सहयोग पनि गरेछन् ।
‘अरे, भाउ त मिलेकै छ, किन नखाने खेत ?’ बिक्रेताले आश्चर्य मान्दै सोध्यो ।
(तपाईँ पनि कोरोना कहरमा परेका पत्रकार हुनुहुन्छ र आफ्नो भोगाइ परिचय खुलाई वा नखुलाई माइसंसारका पाठकहरुसित बाँड्न चाहनु हुन्छ भने हाम्रो फेसबुकको मेसेज बक्समा वा इमेल [email protected] मा पठाउन सक्नुहुन्छ)
1 thought on “एक म्यासेजको भरमा जागिर चट !”
Pingback: आज आफ्नै फ्याक्टचेक : होमपेजमा सबैको सेयर काउन्ट एउटै कसरी ? « Mysansar